एकाबिहानै बालेनले निकाले अर्को कमालको आइडिया, काठमाडौं देखि भ्याली बाहिरसम्मै वाहीवाही ! – Annapurna Post News
एकाबिहानै बालेनले निकाले अर्को कमालको आइडिया, काठमाडौं देखि भ्याली बाहिरसम्मै वाहीवाही !
June 19, 2022 sujaLeaveaComment on एकाबिहानै बालेनले निकाले अर्को कमालको आइडिया, काठमाडौं देखि भ्याली बाहिरसम्मै वाहीवाही !
काठमाडौं । पछिल्लो समय ब्याक टु ब्याक जनताको मन जित्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अर्को कमालको आइडिया निकालेका छन् । काठमाडौंको मुख्य समस्या बनेको फोहोरको व्यवस्थापनलाई लिएर बालेनले एकाबिहानै निकालेको आइडियाले काठमाडौं भ्याली देखि भ्याली बाहिरसम्म प्रशंसा पाएको हो ।
बालेन सिसडोलबासीको हितका लागि सिसडोलमा रंगशाला र पार्क बनाउन आफूहरूले चाहेको बताएका छन्। आज बिहान एन्फाका पंकजविक्रम नेम्वाङसँगको भेटमा उनले सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापन गरी त्यहाँ रंगशाला र पार्क बनाउने चाहना रहेको बताए।
उनले लिग खेल्ने काठमाडौंका क्वलबहरूमा बाहिरका खेलाडीको बर्चश्व रहेकोले स्थानीय खेलाडी टिम बनाउन लागिएको र त्यसका लागि रंगशाला पनि आवश्यक पर्ने बताएका थिए।
‘महानगरका क्लबबाट खेल्ने खेलाडी उत्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षसँग सहकार्य गर्दै ग्रासरूट फुटबलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहन्छौं,’ मेयर बालेनले भने, ‘सिसडोलमा रहेको फोहोरलाई उचित ब्यबस्थापन गरेर सुन्दर रंगशाला र पार्क निर्माण गर्न चाहन्छौं।’
काठमाडौंबाट सिसडोल करिब १२ किलोमिटरको दूरीमा छ। महानगरभित्रका ए डिभिजन क्लवलाई महानगरले बार्षिक १० लाख दिने गरेको छ। नेपाली फुटबलको विकास, विस्तार र कार्यक्रमबारे मेयर बालेनसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको एन्फामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका नेम्बाङले बताए।
‘हामी महानगरमा फुटबलको विकास र कार्यक्रममा सञ्चालनमा सहकार्य गर्न तयार छौं। सुशासन, आर्थिक पारदर्शीता, विकेन्द्रकरणलाई व्यवहारमा लागू गर्दै नेपाली फुटबललाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं,’ उनले भने।
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असार ५ गते आइतबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
हिजो मात्र राजनीतिकमा घोषण गरेका रबि लामिछाने आज जनताको समस्या बुझन पुगे दुर्गम बिकट ठाउ ठाउमा (फोटो फिचर)
दुबई पठाइदिन्छु भनी आकर्षक तलब पाउने लोभ देखाएर लाखौँ ठगी गरेर फरार रहेका विकास र हरिलाई समात्न सफल भयो प्रहरी